मिर्गौला स्वस्थ्य छ वा छैन कसरी थाहा पाउने? बिग्रन नदिन के गर्ने? प्रत्येक मानिसका शरीरमा मेरुदण्डको दुवैतर्फको मध्यभागमा करङको ठीक मुनि दुई वटा सिमी आकारको अंगहरू हुन्छन्। यिनै अंगलाई मिर्गौला भनिन्छ। मिर्गौलाले २४ घण्टामा करिब २ सय लिटर रगत छान्ने काम गर्दछ। बिहीबार, फागुन २६, २०७८
अल्पायुमै किन फुल्छ कपाल? बूढेसकालमा फुल्ने कपाल अल्पायुमै पनि फुलेको देखिन्छ। कपाल मुख्य चार कारणले फुल्ने गर्दछ। पहिलो कारण वंशाणुगत हो। अर्थात परिवारका सदस्यको कम उमेरमा नै कपाल फुल्दै आएको छ भने पनि अल्पायुमै कपाल फुल्ने गर्दछ। बिहीबार, फागुन ५, २०७८
पुरुषहरुमा बाँझोपना आउने कारण के-के हुन्? वैवाहिक जीवनपछि सन्तान प्राप्त गर्ने चाहना सबैको हुन सक्छ। तर, केही दम्पत्तीलाई बाँझोपनका कारण सन्तान लाभ हुँदैन। केही समयअघिसम्म हाम्रो समाजले बाँझोपनको सबै दोष महिलालाई मात्र दिन्थ्यो। तर, अब समय फेरिएको छ। बाँझोपन रोग हो र यो पुरुष या महिला जसलाई पनि हुन सक्छ। शनिबार, माघ २९, २०७८
जाडोमा बालबालिकामा बढी देखिने मुख्य स्वास्थ्य समस्या के हो? कसरी जोगाउने? अहिले जाडो मौसम छ। जाडोमा बालबालिकामा बढी देखिने मुख्य स्वास्थ्य समस्या भनेको मौसमी रुघाखोकी र त्यसको कारण हुने जटिलता तथा दीर्घ असरहरुको समस्या हो। रुघा–खोकीको प्रमुख जटिलता भनेको निमोनिया हुनु हो। शनिबार, माघ ८, २०७८
गर्भावस्थामा कोभिड खोप लगाएका कारण समय नपुगी वा कम तौल भएको बच्चा जन्मिने सम्भावना हुन्छ? गर्भावस्थामा खोप लगाएका कारण समय नपुगी वा कम तौल भएको बच्चा जन्मिने सम्भावना हुँदैन। कोभिड–१९ विरुद्धको खोपले गर्भपान हुने, कम तौलको बच्चा जन्मिने, समय नपुगी जन्मिने, भन्ने कुरा गलत हुन्। आइतबार, पुस २५, २०७८
जाडो मौसममा छाला किन सुख्खा हुन्छ? कस्तो असर पर्छ? सुख्खा हुन नदिन के गर्ने? हाम्रो शरीरको छाला झनै सुख्खा बनाइदिन्छ। जसले गर्दा हाम्रो छाला सुख्खा भएर चिरा परेजस्तो, कत्ला परेजस्तो हुन्छ। छाला शरीरको बाहिरी आवरण हो। बिहीबार, पुस १५, २०७८
किन हुन्छ डिमेन्सिया अर्थात् बुढेसकालमा बिर्सने रोग? लक्षण र बच्ने उपाय के-के हुन्? डिमेन्सिया बुढेसकाल लागेकाले हुने रोग होइन, मस्तिष्कमा रोग लागेपछि हुने समस्या हो। मस्तिष्कमा रोग नलागेका ९० वा १ सय वर्षका वृद्धवृद्धामा पनि डिमेन्सियाका लक्षणहरु देखिँदैनन्। यो कुनै नयाँ रोग पनि होइन सोमबार, पुस ५, २०७८
बाथरुम जानेवित्तिकै पिसाब लाग्दैन किन होला? प्रोष्टेट ग्रन्थिको तौल औसतमा १० देखि २५ ग्रामसम्म हुन्छ। ५० वर्ष नाघेका पुरुषमा प्राय प्रोष्टेट ग्रन्थि बढ्ने क्रममा हुन्छ। ग्रन्थि वृद्धि हुने सिलसिलामा पिसाबनलीको प्वाल साँगुरो पारेर पिसाबमा समस्या पैदा गर्छ। सोमबार, मंसिर २०, २०७८
युरिक एसिड तथा बाथ रोगको समस्या छ? दसैंमा के खाने, के नखाने? कसरी स्वस्थ रहने? युरिक एसिड ज्यादा हुनु र युरिक एसिडले हुने आरथाइटिस जसलाई हामी गाउट भन्छौँ, यी चाहिँ फरकफरक कुरा हुन्। कसैको युरिक एसिड सामान्य ७ भन्दा कम हुनुपर्नेमा ८–९ छ भने उसको जोर्नी नदुखेको पनि हुन सक्छ। शुक्रबार, असोज २९, २०७८
शरीरमा मुसा किन आउँछ? उपचार के? मुसाले शरीर भित्र कुनै हानी गर्दैन तर यो भाइरसबाट हुने भएकाले एक ठाँउबाट अर्को ठाँउमा सर्ने, संख्या र आकार दुवै बढेर जाने हुन्छ। तसर्थ हेर्दा नराम्रो देखिने मुुुसाबाट अरुमा सर्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। शनिबार, असोज १६, २०७८
के आँखाको ज्योति गुमाउने रहस्यमय रोग सापु सेतो पुतलीसँग सम्बन्धित छ? कसरी जोगिने? यो रोगको पूरा नाम 'सिजनल हाइपर एक्युट पनुभिआइटिस' हो। नेपालका पनि केही पहाडी जिल्लामा मात्र देखिएको यो रोग के कारणले लाग्छ भन्ने अझै पत्ता लगाउन सकिएको छैन। यसबारे अध्ययनहरु भइरहेका छन्। मंगलबार, भदौ २९, २०७८
धेरैको ज्यान लिने ‘सेप्सिस’ के हो, कसरी र किन हुन्छ? लक्षण के के हुन्? सेप्सिस भनेको शरीरमा संक्रमण फैलिएर ज्यानै जान सक्ने रोगको एक अवस्था हो। यसलाई शरीरमा रोग विरुद्ध लड्ने तत्वहरु वा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले रोगसँग लड्दा उत्पन्न हुने एक किसिमको शारीरिक प्रतिक्रियाको रुपमा हेर्न सकिन्छ। मंगलबार, भदौ २९, २०७८
बच्चा जन्माउन चाहने महिलाले अस्थायी साधन कहिले छाड्ने? बढ्दो उमेरका अतिरिक्त आधुनिक जीवनशैली, तनाव र प्रदूषणका कारण पनि प्रजनन शक्तिमा असर पर्छ। उच्च रक्तचाप, मधुमेह वा थाइराइडजस्ता रोग प्रजनन शक्तिका लागि बाधक हुन्। यस्तै, उमेरखाएका महिलामा गर्भाशयको ट्युमर हुने सम्भावना पनि हुन्छ। शनिबार, भदौ २६, २०७८
निपाह भाइरसका ७ लक्षण र रोकथामका ७ उपाय निपाह भाइरस पशुबाट मिनसमा सर्ने एक गम्भीर प्रकृतिको रोग लाग्ने भाइरसको संक्रमण हो। यस भाइरस प्राकृतिक रुपमा फ्रुट ब्याट भन्ने प्रजातिको चमेरोमा पाइन्छ। शुक्रबार, भदौ २५, २०७८
तिजमा नाँच्दानाँच्दै किन मुर्छा पर्छन् महिला? यस्तो अवस्थामा के गर्ने? ब्रतका समयमा कोही महिला मुर्छा परेर ढलेमा तत्कालै पानी, ग्लुकोज पानी वा जीवनजल दिनु पर्छ। यसो गर्दा पनि स्वास्थ्यमा सुधार नआएमा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा लैजानु उपयुक्त हुन्छ। बिहीबार, भदौ २४, २०७८
के कोभिड-१९ भाइरस लामखुट्टेको टोकाइले सर्छ? कोभिड-१९ भाइरस लामखुट्टेको टोकाइले सर्दैन। हालसम्म लामखुट्टेको टोकाइले कोभिड-१९ भाइरस सर्न सक्ने कुनै पनि प्रमाण भेटिएको छैन। मंगलबार, भदौ १, २०७८
के सर्जिकल/मेडिकल मास्कलाई स्यानिटाइजर छर्केर पुन:प्रयोग गर्न मिल्छ? सर्जिकल/मेडिकल मास्क एक पटकको प्रयोगको लागि मात्र बनाइएको हुन्छ त्यसैले सम्भव भएसम्म एक चोटि प्रयोग गरेपछि यस्ता मास्क पुन:प्रयोग गर्नु हुँदैन। सोमबार, साउन ३२, २०७८
के सरकारले दिन लागेको जोन्सन एन्ड जोन्सनको कोभिड खोप सुरक्षित छ? सुरक्षित छ। अमेरिकाको औषधि नियामक निकाय (एफडिए)ले जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोपले स्नायू प्रणाली सम्बन्धी गीयान बार्रे सिन्ड्रोमको जोखिम बढाउन सक्ने जानकारी दिएपछि यो खोप सुरक्षित नभएको हल्ला फैलिएको छ। तर अहिलेसम्म उपलब्ध प्रमाणले खोप र गीयान बार्रे सिन्ड्रोमको जोखिमबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको देखिएको छैन। शुक्रबार, साउन १, २०७८
किशोर अवस्थामा कस्ता किसिमका शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनहरु हुन्छन् र किन? कशोरावस्थामा शारीरिक परिवर्तनको प्रमुख कारण त मानव विकासको प्रक्रिया नै हो। प्रकृतिले त्यसबेला रागरस (हर्मोन) उत्पन्न गराउँछ र यो मानव शरीरको एक ग्रन्थ्रि पिट्युटरी ग्रन्थिले नियन्त्रण गर्दछ। बिहीबार, असार १७, २०७८
उच्च रक्तचाप, मधुमेहका बिरामीले कोभिड संक्रमण हुँदा नियमितरुपमा सेवन गर्ने औषधि खान हुन्छ कि हुँदैन? कोभिड १९ संक्रमण भएर आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ र लक्षण देखिएका छन् भने पनि तपाइँले नियमितरुपमा लिनुपर्ने औषधि सेवन गर्नुपर्छ। आइतबार, असार ६, २०७८
के भिजेको मास्क सुरक्षित हुन्छ? भिजेको मास्कबाट सास फेर्न असहज र हानिकारक हुने मात्र नभई यसले भाइरसलाई पनि छेक्न सक्दैन। त्यसैले, घर बाहिर निस्कँदा सकेसम्म पानीले नभिज्ने झोलामा अतिरिक्त मास्क बोक्ने बानी बसालौं। शुक्रबार, असार ४, २०७८
के कोभिड-१९ को खोप लगाएपछि शरीर चुम्बकीय बन्छ? कोभिड-१९ को खोपहरुमा कुनै प्रकारको धातु वा माइक्रोचिप्सहरु हुँदैन। त्यसैले यस्ता अफवाहको विश्वास नगरौं। कोभिड-१९ को खोप सुरक्षित र प्रभावकारी छ र यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा कुनै प्रतिकूल असर गर्दैन। आइतबार, जेठ ३०, २०७८